Maxaad u baahan tahay inaad ogaato Hal sano kaddib inqilaabkii fashilmay ee Turkiga?!
Turkey (Horumar Online) – Sannad ayaa kasoo wareegtay isku daygii inqilaab ee fashilmay kaasoo ay kadambaysay kooxda uu hogaamiyo wadaadka Fatuhullah Gülen loona yaqaan “Hizmet”.
FAALLO – Xukuumadu weey ku shaqeyn kartaa miisaaniyad ku saleysan dakhliga gudaha (Faallo)
Muqdisho (Horumar Online) Waa qasab in dowlad kasta ay ku dhaqaaqdo barnaamijyo Maaliyadeed oo aasaas u ah keydinta dhaqaalaha ka soo xerooda bulshada
FAALLO: DF Soomaliya maka go’an tahay xakameynta hubka iyo xasillinta Xamar?!
FAALLO (Horumar Online) - Dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa muuqday calaamado ifaya oo suurtagaliyay in ay dib u soo noqoto sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen dadka ...
QORMO (Horumar Online) - Intii aan xilka Wasiirnimo hayay waxaan u dhoofay safarro shaqo oo dhowr ah. Marka laga reebo shir ay Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Afrika ay isugu yimaadeen ...
FAALLO (Horumar Online) - Inta aanan u gelin cidda ay wax ka tabanayaa taageerayaasha maamulka Soomaaliland iyo madaxdooda: Ma dowladdii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa Alaha u naxariistee Madaxmed Siyaad Barre mise ...
FAALLO – Boqolkii maalmood ee Farmaajo, maxaa ba’ay, maxaase noo barkoobay?!
Muqdisho (Horumar Online) - Waa qormo aan ku qaadaa dhigayno waxa ka qabsoomay 100-kii maalin ee uu xafiiska fadhiyey madaxweyne Farmaajo. Sidaan ka war qabno madaxdu marka ay xilka raadinayso ...
Wasiir Xoosh Jabriil oo faallo cajiib ah qoray: Mucaarad mise MUCAARAD?
FAALLO (Horumar Online) - Mucaarad iyo MUCAARAD waa kala labo oo haddana kala akhris !!! -Waxaa baryahaan bilowday guux ay wadeen dhowr qof oo siyaasiyiin ah oo ka waday dalka dibaddiisa ...
Ciidanka Xoogga Soomaaliyeed oo Wacad ku maray Sifeynta Cadowga Gudaha, kaddib helitaankii hoggaamiye Geesi ah
Muqdisho (Horumar Online) - Dalkeenu waxa uu ahaa 1960-1990 mid ka difaacan labada cadaw ee dal dumiya oo ah kan gudaha ugu horayn iyo kan labaad oo ah dibada iyo ...
FALANQEYN XASAASI AH: Maxaad tahay Caqabadaha Horyaala Heshiisyada madaxweyne Farmaajo?!
Muqdisho (Horumar Online) - Dowladda Soomaaliya waxaa ay isku diyaarisay shirka London, madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa ay isku afgarteen in la qaato heshiisyada iskaashiga cusub ama ...
FAALLO – Maxay tahay Fursadaha Madaxweyne Farmaajo iyo filashada 2021?!
Muqdisho (Horumar Online) - Burburkii dalka Somalia waxa uu sababay kala irdoobida umada soomaaliyeed iyadoo qofkastaba taagtiis uu tilaabsaday, qaar dalalka deriska ah u hayaamay, qaar tahriibay iyo qaar kale ...